नेपालमा खोप कार्ड कहाँकहाँ अनिवार्य, हराए के गर्ने र लिन कहाँ जाने? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
नेपालमा खोप कार्ड कहाँकहाँ अनिवार्य, हराए के गर्ने र लिन कहाँ जाने?
२०७८, २९ पुष बिहीबार १३:३६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयहरू, सार्वजनिक स्थल र भिडभाड हुने ठाउँमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप लगाएको प्रणाण देखाउन खोप कार्ड अनिवार्य गरिएसँगै त्यसबारे धेरैमा चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाइएको छ।
अब सरकारी कार्यालयसहित होटल, रेस्टुराँ, हल, रङ्गशाला, पार्क लगायतमा प्रवेशका लागि माघ ७ गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य हुनेछ। आन्तरिक उडानका लागि विमानस्थल प्रवेशका लागि भने माघ ३ गतेदेखि नै खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उहाँले भन्नुभयो ‘खोप कार्ड नहराउनुहोस् किनभने खोप कार्डले भोलि हामीलाई थप खोप लगाउने सन्दर्भमा, विदेश जानुपर्दा चाहिने प्रमाणका सन्दर्भमा, सरकारी निकायमा गएर कुनै काम कारबाही गर्नुपर्ने बेलामा प्रवेश गर्ने कुराहरूमा पनि हामीलाई त्यो अत्यन्त आवश्यक पर्छ।’
त्यस्तो विवरण सधैँका लागि सुरक्षित हुने चाहेको बेलामा सहजै लिन सकिने अधिकारीले बताउनुभयो ।
कार्ड हराएका र नपाएकाले के गर्ने?
उहाँले भन्नुभयो “पहिला खोप कार्ड नभएर केही स्थानमा खोप लगाउनेहरूले पनि कार्ड नपाएको कुरा साँचो हो। तर अहिले कार्ड नपाउने भन्ने अवस्था छैन।”
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन भन्नुहुन्छ, “अब खोप लगाएको लगाएकै गर्दा ठ्याक्कै कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विवरण त हामीसँग छैन तर पक्कै पनि त्यसो गर्नु राम्रो चाहिँ होइन।”
त्यस्तै करिब साढे ५० प्रतिशतले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। तर १८ वर्ष माथिका जनसङ्ख्यामध्ये करिब ७७ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन्।
त्यस्तै उक्त उमेर समूहका करिब ५८ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म दुई करोड ६७ लाख मात्राभन्दा बढी मात्रा खपत भइसकेको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। बीबीसीबाट साभार